Jurgen Klopp Oo Hal Arin Ka Dalbaday Jamaahiirta Kooxda Liverpool, Kahor Kulanka Roma – Gool FM
(Liverpool) 27 Abriil 2018 Jurgen Klopp ayaa ka codsaday jamaahiirta kooxda Liverpool inay wanaajiyaan hab dhaqan kooda, marka ay u safrayaan caasimada dalka talyaaniga isbuuca soo aadan, kulanka lugta labaad wareega siddeed dhamaadka ay ku booqan doonaan AS Roma Stadio Olimpico.
Macalinka reer Germany ayaa ka codsatay taageerayaasha Reds in ay ka fogaadaan rabshadaha isla markaana aysan dhicin in mid ka mid ah jamaahiirta la jiiifiyo Isbitaalka, sababa la xiriira dhibaatooyinkii ka dhacay Anfield talaadadii lasoo dhaafay.
Qaar ka mid ah taageerayaasha Roma ayaa sababay rabshado kulankii lugta hore wareega afar dhamaadka ay Liverpool guusha ku gaartay 5-2, halkaas oo ay waxyeelo kasoo gaartay qaar ka mid ah jamaahiirta kulankaas qeybta ka ahaa.
Klopp oo kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka Stoke City ayaa wuxuu yiri: “Wanaajiya hab dhaqanka, waa wax macquul ah, qof walba wuxuu doonayaa inuu amaan ahaado, marnaba ma arkin jamaahiirta Reds oo raabshado sameenaya tan iyo imaatinkeyga halkan, runtii ma jecli qeybtan marka ay tahay kubada cagta”.
“Anigu ma fahmi karo rabshadahan, waxaan rajeenayaa inaysan sidaas noqonin, waa ciyaar aad u wanaagsan, hadii aan dooneyno in taageerayaasha ay qeyb ka noqdaan garoomada, waa inaan muujinaa masuuliyadeena, waxaan kula talinayaa taageerayaasheena inaan ka fogaano dhibaatooyinka”.
Waxaa xusid mudan in lugta labaad UCL ee Roma la ciyaari doonto Arbacada wuxuuna ka dhici doonaa Olympic Stadium, iyadoo kooxda reer Italy ay u baahan tahay inay ku guuleysato ugu yaraan 3-0, si ay ugu gudubto kulanka finalka.
Daniele De Rossi: “Wuxuu Ahaa Go’aan Qaldan In Aaan Maro Wadadan”